သူတို့၏ မူလဘဝနှင့် အစသည် မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူ ၁၅၁၆ ခုနှစ်တွင် တပင်ရွှေထီးအား အထိန်းတော်အဖြစ် ခုနစ်ဦးရွေးချယ်ရာတွင် ပါဝင်ခဲ့ရာမှ ဘဝပြောင်းလဲလာခဲ့သည်။ ဇနီးဖြစ်သူမှာ ဒုတိယသား ရဲထွတ်ကို မွေးဖွားပြီး သုံးလမျှရှိသေးသည့်အချိန်တွင် တပင်ရွှေထီး၏ နို့ထိန်းအဖြစ် ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသည်။ ထိုအချိန်က မင်းကြီးဆွေ မိသားစုတွင် သားသုံးဦးရှိနေခဲ့ပြီး အငယ်ဆုံးမှာ ငယ်စဉ်ကပင် ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးနောက် တောင်ငူနန်းတော်သို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ရသည်။ ရှင်မျိုးမြတ်သည် ၁၅၂၀ ဆယ်စုနှစ်ကာလတွင် ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးနောက် မင်းကြီးဆွေသည် ရှင်မျိုးမြတ်၏ ညီမဖြစ်သူနှင့် ထပ်မံလက်ထပ်ခဲ့ကာ နောက်ထပ် သားနှစ်ဦးဖြစ်သော တောင်ငူမင်းခေါင် နှင့် သတိုးမင်းစောတို့ကို ထပ်မံမွေးဖွားခဲ့သည်။ သူ၏ အငယ်ဆုံးသားကို ၁၅၃၁ ခုနှစ် မေလတွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။[note 1] မင်းကြီးဆွေမိသားစုသည် တပင်ရွှေထီးအား သားအရင်းကဲ့သို့ ကျွေးမွေးပြုစုခဲ့ကြပြီး တပင်ရွှေထီး မင်းသားဘဝတွင် သူတို့အား မိဘအရင်းသဖွယ် ဆက်ဆံခဲ့သည်။ တပင်ရွှေထီးသည် မင်းကြီးဆွေအား အလွန်ရိုသေလေးစားသူ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြသည်။
၁၅၄၀ ခုခနှစ်တွင်[note 2] တပင်ရွှေထီးသည် မင်းကြီးဆွေအား တောင်ငူဘုရင်ခံအဖြစ် မင်းရဲ သီဟသူဘွဲ့ဖြင့် ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ ထီးနန်းကို တောင်ငူမှ ပဲခူးသို့ ပြောင်းရွေ့ပြီး တစ်နှစ်ခန့်အကြာတွင် တပင်ရွှေထီးဘုရင်က ပထမဆုံး ခန့်အပ်သော ဘုရင်ခံ ဖြစ်သည်။ (တပင်ရွှေထီးသည် အခြားအစေခံတစ်ဦးဖြစ်သော ရှင်နီတာအား ပြည်ဘုရင်ခံအဖြစ် နောင်နှစ်နှစ်အကြာတွင် ခန့်အပ်ခဲ့သေးသည်။) နောက်ပိုင်းနှစ်များတွင် တပင်ရွှေထီးသည် မင်းကြီးဆွေအား ရိုသေလေးစားစွာဖြင့် ဆက်လက် ဆက်ဆံခဲ့သည်။ ၁၅၄၅ ခုနှစ်တွင် ပြုလုပ်သော ပဲခူးနန်းတက်ပွဲတွင် မင်းကြီးဆွေသည် ဘုရင်၏ အယုံကြည်ရဆုံး လူယုံတော်အဖြစ် ဘုရင်၏ ညာဖက်တွင် နေရာပေးခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ ယင်းနှစ်မှာပင် မင်းကြီးဆွေသည် တောင်ငူတွင် မြစည်းခုံစေတီတော်ကို တည်ထားခဲ့သည်။
သားတော်များနှင့် မတူဘဲ မင်းကြီးဆွေသည် စစ်တိုက်ထွက်ခဲသည်။ ယင်းအစား ဘုရင် စစ်ထွက်နေချိန်တွင် အရှေ့ဖက် ရှမ်းပြည်နယ်များမှ တောင်ငူသို့ ကျူးကျော်လာမှုများကို ကာကွယ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ၁၅၄၈–၁၅၄၉ ခုနှစ်တွင် ဖြစ်ပွားသော ယိုးဒယားကျူးကျော်စစ်ပွဲတွင် တပ်ရင်းတစ်ခုကို ကွပ်ကဲကာ သူ၏ သားတော်များ၊ ဘုရင်နှင့် အတူ ပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ မင်းကြီးဆွေသည် ရှေ့တန်းမှ ပြန်လာပြီး ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြ ၁၅၄၉ ခုနှစ် မတ်လတွင် ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။[note 3]
(Zata 1960: 79): Thado Minsaw was born on Saturday, 5th waxing of Nayon 893 ME (20 May 1531).
(Sein Lwin Lay 2006: 175): Chronicles only say he was appointed viceroy in 902 ME (29 March 1540 to 29 March 1541). But since he was already styled as Minye Thihathu at the start of the Martaban campaign in November 1540, the appointment took place between 29 March 1540 and November 1540.
(Sein Lwin Lay 2006: 236): He died in 910 ME after having participated in the 1548–1549 Siamese campaign. Since Tabinshwehti arrived back at Pegu on 1 March 1549 (3rd waxing of Late Tagu 910 ME) per (Sein Lwin Lay 2006: 232), Mingyi Swe most probably died during the remaining weeks of 910 ME, which ended on 2nd waxing of Late Kason, 29 March 1549.
Thaw Kaung 2010: 102–103
Thaw Kaung 2010: 118–119
Thaw Kaung 2010: 104–105
Sein Lwin Lay 2006: 247–248
Sein Lwin Lay 2006: 312
Hmannan Vol.22003: 183
Sein Lwin Lay 2006: 126–127
Sein Lwin Lay 2006: 158
Sein Lwin Lay 2006: 175
Sein Lwin Lay 2006: 199
Hmannan Vol.22003: 226
Hmannan Vol.22003: 229
Hmannan Vol.22003: 240
Royal Historical Commission of Burma (1832)။ Hmannan Yazawin (Burmeseဘာသာစကားဖြင့်)။ 1–3 (2003 ed.)။ Yangon: Ministry of Information, Myanmar။ CS1 maint: unrecognized language (link)
Sein Lwin Lay၊ Kahtika U (1968)။ Mintaya Shwe Hti and Bayinnaung: Ketumadi Taungoo Yazawin (Burmeseဘာသာစကားဖြင့်) (2006, 2nd printing ed.)။ Yangon: Yan Aung Sarpay။ CS1 maint: unrecognized language (link)